चौथो सयपत्री गोल्डकप नकआउट फुटबल प्रतियोगिता – www.janabato.com
Latest TOP STORIES खेलकुद
चौथो सयपत्री गोल्डकप नकआउट फुटबल प्रतियोगिता
२२ कार्तिक २०७६, शुक्रबार १२:२२ November 8, 2019 Janabato Online0Comments
स्वस्तिक श्रेष्ठ/बुटवल, २२ कार्तिक /स्व. ज्ञान बहादुर गुरुङ स्मृति चौथो सयपत्री गोल्डकप नकआउट फुटबल प्रतियोगिता २०७६ अन्तरगत शुक्रबारको खेलमा सिद्धार्थ युवा क्लब बासगढी विजयी भएको छ । सिम्रिक युवा क्लब कालिकानगरलाई १–० गोल अन्तरले पराजित गर्दै सिद्धार्थ क्वाटरफाईनलमा प्रवेश गरेको हो ।
रामनगर खेलमैदानमा भएको प्रतिस्प्रर्धात्मक खेलमा सिद्धार्थका जमीर मियाले एकमात्र गोल गरेका थिए । खेलको ६६ औ मिनेटमा बिमल श्रीषको पासमा जसीरले गोल गरेका थिए । उनि खेलमा म्यान अफ दी म्यानबाट पुरस्कृत भएका थिए । शनिबार पहिलो क्वाटरफाईनल खेलमा आयोजक सयपत्री युवा क्लबले पाल्पा–११ को सामना गर्ने सचिव सन्तोष गुरुङले बताए । कार्तिक ३० गतेसम्म संचालन हुने प्रतियोगितामा प्रतियोगितामा १२ टिमले भाग लिएका छन ।
← रुपन्देहीमा निर्वाचन र आम सञ्चार विषयक कार्यशाला शुरु
हरिबोधिनी एकादशी : तुलसीको विवाह र दिउसी-भैलो खेलेर मनाइँदै →
निर्मलाको पक्षमा न्याय माग्दा जेल जानु पर्ने ?
२० मंसिर २०७५, बिहीबार ०९:५७ Janabato Online Comments Off on निर्मलाको पक्षमा न्याय माग्दा जेल जानु पर्ने ?
गीत-फुल्नेछ जून, खुल्नेछ आकाश
३२ श्रावण २०७६, शनिबार ०५:२३ Janabato Online Comments Off on गीत-फुल्नेछ जून, खुल्नेछ आकाश
बुद्धिजीवी थला पर्छन् भनेको के हो प्रधानमन्त्री ज्यू ?
२४ मंसिर २०७५, सोमबार १३:५२ Janabato Online Comments Off on बुद्धिजीवी थला पर्छन् भनेको के हो प्रधानमन्त्री ज्यू ?